SOVARAMITA - Hetsiky ny Sandratra
Toy ny fanaony isaky ny volana novambra dia ny mpiray faribolana Sandratra avy any Antsirabe indray no nifamotoana tamin’ny mpankafy ny poezia tetsy amin’ny efitrano malalaky ny CGM Analakely ny sabotsy 22 novambra teo. SOVARAMITA : io no lohatenin’ny hetsika sy ny boky izay nozaraina tamin’ny mpijery. Nosokafana tamin’ny feon-kira gasigasy niarahana tamin’ny tarika ARIVOLAHY ny fotoana.
Fa nahoana tokoa moa no natao hoe sôvaramita ny hetsika? Namaly izany ny sasinteny novakian’i Nalisoa Ravalitera tao amin’ny boky izay manazava fa ny “sôva“ dia fitanisana hevitra na lohahevitra. Ny “ramita“ kosa dia avy amin’ny teny hoe kidaombaramita izay toy ny gadona milantolanto.
Antsa tononkalo sy sôva
Taorian’izay dia nisy ny fiantsana tononkalo sy sôva nataon’ireo mpanoratra tao amin’ny boky dia I RA-PHI Sy L Niry Andriamora ary I Georges Randrianambinina, nifandimbiasan’ireo tanoran’ny Faribolana Sandratra Antananarivo nahitana an’i Liantsoa, Serge, RIMA, Zazangaly, Mero Kosiky, Lefitra Aloky ny Ara, Ny Andriniela.
Sakafon-tsaina araka izany ny sôva satria azo amoronana voambolana maro samihafa miainga avy amin’ny teny iray sy ny fanazavana azy ireo. Ny teny hoe “ fotsy ” ohatra dia azo anaovana voambolana marobe toy ny hoe:
- rafotsy iantsoana ny vavy ao an-trano
- volo fotsy ilazana ny efa mandroso taona
- volafotsy sy ny sisa e.
Literatiora am-bava mahavoky ny sofina ny sôva ary mahafaly ny fo koa satria nahay nampihanoka ny mpijery tamin’ny hatsikana ireo mpisôva.
Tsapa tokoa fa manankarena dia manankarena ny fiteny Malagasy ary manana ny maha-izy azy tanteraka ny literatiorantsika ka mendrika ho tandrovintsika.
Lefitra Aloky ny Ara
Zazangaly sy Lefitra Aloky ny Ara
Mero Kosiky sy Leflitra Aloky ny Ara
Ny tarika ARIVOLAHY
Ra-phi sy L Niry ANDRIAMORA ary Nalisoa Ravalitera
IREO REHETRA NANDRAY ANJARA